ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် မုံရွာ-ပုသိမ်လမ်းဆုံတွင် ကြေးနီစီမံကိန်း လုပ်ဆောင်နေသောကုမ္ပဏီများကိ?? - Yangon Media Group
ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် မုံရွာ-ပုသိမ်လမ်းဆုံတွင် ကြေးနီစီမံကိန်း လုပ်ဆောင်နေသောကုမ္ပဏီများကိ??
ဆားလင်းကြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ယင်းမာပင်ခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် မုံရွာ-ပုသိမ်လမ်းဆုံတွင် လက်ပံတောင်း တောင် ကြေးနီစီမံကိန်းလုပ် ဆောင်နေသော ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ၊ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့အား အခေါင်း များသွင်း၍ မီးရှို့သင်္ဂြိုဟ်သည့်ပုံစံ ကျိန်စာတိုက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သော ဒေသခံငါးဦးကို ဆားလင်းကြီး မြို့မရဲစခန်းတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ရက် ညနေ ၄နာရီခန့်က ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် တုံရွာ၊ မိုးကြိုးပြင်ရွာ၊ ဆည်းတည်း ရွာတို့မှ ကိုဝင်းကျော်၊ ကိုခင်ငြိမ်း၊ မရီရီဝင်း၊ မစန္ဒာ၊ မစန်းနွဲ့ တို့ ဦး ဆောင်ပြီး ဒေသခံအင်အား ၅ဝ ခန့်သည် တရားဝင်ခွင့်ပြုစာတင် ပြခြင်းမရှိဘဲ လက်ပံတောင်းတောင် ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ရေးအလံ များကို ကိုင်ဆောင်ကာ ဦးပိုင်၊ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ စာများရေးထား သော လူသေအခေါင်းပုံစံနှစ်လုံး ကို မီးရှို့သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းများပြုလုပ် ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းကြောင့် ယင်းသို့အမှု ဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
”တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ရောက် တိုင်း ဒေသခံတွေက ဆန္ဒပြတာပါ ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကျိန်စာတိုက်ပြီး တိုင်းလည်း ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းထဲ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ဖြစ်တာပဲ။တောင်းဆိုနေတာတွေတော့ လျစ် လျူရှုပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ပုဒ်မ တွေသာ အမျိုးမျိုးတပ်ဖွင့်နေတာ၊ ဖမ်းလည်း ရင်ဆိုင်သွားမယ်”ဟု ဆန္ဒပြမှုတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ပံတောင်းဒေသခံများ သည် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းလုပ်ဆောင်နေ သော မြန်မာ-ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီအား ဝိညာဉ်ခေါ် ဆန္ဒပြခြင်း၊ အခေါင်း များ မီးရှို့ဆန္ဒပြခြင်း၊ တောစောင့် နတ်၊ ရွာစောင့်နတ်များအားတိုင် တည်၍ ကျိန်စာတိုက်ခြင်းစသော သရုပ်ဖော်ဆန္ဒပြခြင်းများကို မကြာခဏ ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး ယခု ဆန္ဒပြမှုသည် ၂ဝ၁၈ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေသခံများသည် မြန်မာ-ဝမ် ပေါင်ကုမ္ပဏီကို လက်ပံတောင်း တောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အစီရင် ခံစာပါ အချက်များလိုက်နာရန်၊ ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံ များ အလုပ်အကိုင်ထိခိုက်မှု၊ ချင်း တွင်းမြစ် မြေနုကျွန်းများ အက်စစ် ညစ်ညမ်းရေများကြောင့် ထိခိုက် မှု၊ ကြေးနီစီမံကိန်းကျောက်ခွဲစက် မှ လွင့်ပျံ့လာသည့် ကျောက်မှုန့် များကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးခြံများ လူနေရပ်ဝန်းများ ထိခိုက်မှု၊ နိုင်ငံ တော်စီမံကိန်း အမည်ခံပြီး ပွင့် လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ ဒေသခံ တောင်သူများ၏ မြေယာများအား မတရားသိမ်းယူထားကာ အစီရင် ခံစာပါအချက်ဖြစ်သည့် အစား ထိုးမြေ ဧက ၁၉ဝဝ မဖော်ထုတ် ပေးခြင်းနှင့် ပိုလျှံမြေများကို မစွန့် လွှတ်သည့် ကြေးနီစီမံကိန်းအား ရပ်ဆိုင်းပေးရန် တောင်းဆိုနေကြ ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခဲ့သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အရေးယူ
ဇန်နဝါရီလအတွက် အကောင်းဆုံးဆုများကို မန်စီးတီးတိုက်စစ်မှူးအဂူရိုနှင့် အက်ဒီဟိုဝီတို့ ဆွတ??
အရပ်ဘက်အဖွဲ့များ၏ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ မုံရွာတွင် သုံးရက်ကြာကျင်းပမည်
အိမ်ရာ ပိုင်ဆိုင်လိုသူများအတွက် အိမ်ရာချေးငွေ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီ
အစိုးရ နေ့စား အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခကို ကျပ် ၄၈ဝဝ အဖြစ် တိုးမြှင့် ခံစားခွင့်ပြု၊ မေ ၁၄ ရက်မှ စ
ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းမြေ တိုင်းတာမှု ယခုလကုန် စတင်မည်